Rwanda ‣ Zimbabwe Voice
RWANDA’S economy is expected to grow by 10.2 percent this year (2021) after its growth was revised upwards from the initial 5.1 percent, Central Bank Governor John Rwangombwa has said. Rwangombwa made the disclosure on Thursday, November 18, 2021 while presenting the National Bank of Rwanda’s 202/021 activity report to Parliament’s both Chambers. In 2020, Rwanda’s economy fell by 3.4…
RWANDAN authorities have arrested nine people linked to an opposition party and a journalist in the last week, as they intensify their crackdown on opponents and critics, Human Rights Watch said. The crackdown appears connected to an event, “Ingabire Day,” organized by the unregistered opposition party Dalfa-Umurinzi, that had been scheduled for October 14, 2021, to discuss among other things…
Rwanda’s President Paul Kagame on Wednesday told a delegation from Zimbabwe led by their Minister of Foreign Affairs and International Trade, Frederick Shava, that his country urgently needs quality teachers from Zimbabwe. The Rwandan leader was interacting with over 200 participants during the inaugural Rwanda-Zimbabwe Trade and Investment Conference that is ongoing in Kigali since Tuesday. “I think Zimbabwe can offer us…